Talyaaniga Oo Tartanka Euro Ka Saaray Belgium Una Gudbay Semi-finalka - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaTalyaaniga Oo Tartanka Euro Ka Saaray Belgium Una Gudbay Semi-finalka
Talyaaniga Oo Tartanka Euro Ka Saaray Belgium Una Gudbay Semi-finalka
Xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa 2-1 ku garaacay Belgium una gudbay wareegga Siddeedda oo ay isku haleeli doonaan Spain.
Laba gool oo qurux badnaa oo qaybtii hore ay dhaliyeen ayaa Talyaaniga ugu filnaanay inay iska xaadiriyaan wareegga siddeedda, halka Belgium oo fursado badan heshay ay kaliya hal gool oo rikoodhe ahaa heleen dhamaadka qaybta hore.
Daqiiqaddii 13aad ayuu Leonardo Bonucci gool u dhaliyey Talyaaniga, kaddib markii uu shafka kusii riixay kubbada, siina dhaafiyey Thibaut Courtois, hase yeeshee markii ay dabbaal-degga dhamaysteen ayaa laga soo eegay VAR, meeshana laga saaray goolkaas.
Romelu Lukaku ayaa labad fursadood oo cajiib ahaa iska lumiyey daqiiqadihii ugu horreeyey ka hor inta goolka naxdinta ah aanu Bonucci ku argagax gelin, laakiin waxa uu midna u dhiibay Donnarruma midka kalena wuxuu dulmariyey goolka.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa dabbaal-degay daqiiqaddii 31aad, markaas oo gool qurux badan uu u dhaliyey laacibka da’da yar ee Nicola Borella oo kubbad uu difaaca kala dhex-baxay dhinaca midig ka dhigay Courtois oo qaban kari waayey.
Kubaddan ayaa waxa kasoo shaqeeyey laacibka khadka dhexe ee Marco Verratti.
Lorenzo Insigne ayaa hoggaanka usii dheereeyey Talyaaniga daqiiqaddii 44aad, waxaanu u dhaliyey gool qurux badan oo uu ciyaarta kaga dhigay 2-0.
Iyadoo siidhiga dhamaadka afka lagu hayo ayaa uu Belgium loo dhigay kubbad rikoodhe ahayd oo dood badan ay ka keeneen Talyaanigu, laakiin VAR oo laga soo hubiyey lagu buriyey dooddooda.
Romelu Lukaku ayaa gool u beddelay rikoodahaas, waxaanay qaybta hore kusoo dhamaatay 2-1.
Qaybtii dambe ayay Belgium soo xoogaysatay, waxaanay si fiican gacanta ugu dhigtay khadka dhexe halka uu Lukaku culays badan ku hayey difaacyahannada isagoo adeegsanaya jidhkiisa awoodda badan iyo orodkiisa dheereeya.
Fursad layaab lahayd oo kubadda meel bannaan loo dhigay Lukaku ayaa si lama filaan ah uu bilowga qaybta hore iskaga khasaariyey, waxaana sidoo kale fursado lumiyey Jeremy Doku oo ahaa ciyaartoygii rikoodhaha keenay iyo xiddigo kale.
Talyaaniga ayaa qaybtii dambe awoodda saaray sidii ay u ilaashan lahaayeen goolka oo uu sidoo kale waardiye ka ahaa Gianluigi Donnarumma, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 2-1 ay guushu ku raacday Talyaaniga.
Semi-finalka ayay Talyaaniga isku ballansadeen xulka qaranka Spain oo iyaguna fiidkii rikoodheyaal kaga soo badiyey Switzerland.